फूल बेचेर एकैदिनमा डेढ लाख आम्दानी - Medianp
मिडिया एनपी १प्रकाशित मिति: बुधबार, कार्तिक २२, २०७४१६:०६0
लमजुङ, २२ कात्तिक । ढकमक्क फूलबारी । बिहानैदैखि कोही न कोही ग्राहक फूलबारीमा आउँछन् । ग्राहकलाई फूल देखाउँदा, बिक्री गर्दा व्यवसायी हुमा गुरुङलाई फुर्सद नै छैन ।
बेँसीशहर नगरपालिका–३, बोहोरावेसीमा तीन वर्षदेखि पुष्प नर्सरी व्यवसायमा लागेकी गुरुङको जीवनशैली नै परिवर्तन भएको छ । पुख्र्यौली घर घनपोखराबाट १५ वर्षअघि बेँसीशहर झर्नुभएकी हुमा शुरुमा एउटा निजी विद्यालयमा पढाउँथिन् । केही वर्ष पढाएर गुरुङले एउटा गैरसरकारी सस्थामा काम गरे । त्यहाँको जागिर पनि छोडेर गुरुङले तीन वर्षअघिबाट पुष्प व्यावसाय शुरु गरेकी हुन् ।
पुष्प व्यवसाय शुरु गरेकी भएकी गुरुङ जिल्लामै एक्लो हो । उनले यसलाई सम्भावनाको पेशाका रुपमा चिनेकी छिन् । शुरुमा फूल व्यवसाय पनि हुन्छ र ? भनेर गुरुङको खिल्ली उडाउनेहरु अहिले उहाँकै नर्सरीमा फूल किन्न पुग्ने गर्दछन् । “फूलको पनि खेती हुन्छ र भन्नेहरु अहिले सबैभन्दा महँगो फूल किन्न आउने गरेका छन्,” गुरुङ भनिन् ।
पुष्प व्यवसायबाट नैै मासिक रु दुई लाखदेखि रु तीन लाखसम्म आम्दानी गर्न सकेको उनले बताइन् । फूल, बिरुवा, दुवो र बगैँचा सजावटबाट नै मनग्य आम्दानी हुने गरेको गुरुङको भनाइ छ । “एकै दिनमा डेढलाख रुपैयाँसम्मको फूल बिक्री गरेकी छु”, उनले भनिन्, “अरु बेला सामान्यतया दैनिक रु पाँच हजारदेखि रु दश हजारसम्म बिक्री हुन्छ ।”
करिब आठ रोपनी जमिनमा उनले मौसमी तथा सदाबहार पुष्प नर्सरी व्यवसाय गर्दै आएकी छिन् । उनले पछिल्लो समय दुवोको समेत व्यवसाय शुरु गरेकी छिन् । तिहार लक्षित गरेर गुरुङले तीन रोपनी जग्गामा सयपत्री जातको फूल खेती गरेकी थिइन् । तर तिहार अगावै सबै फूल बिक्री भयो । सो बाहेक धूपी, अशोका, क्रिसमस ट्री, सप्लेरिया लगायतका आकर्षक बिरुवा नर्सरीमा उमारिन् । उनले आफ्नो नर्सरीबाट फिटोनिया, असर्पी, केलनडुला, डेन्थ सिनेरिया, प्रिमुला, जारबेरा, कार्मेसन, सनफ्लावर, बटरफ्लाई जस्ता मौसमी फूलका बिरुवा र एजोलिया, कार्नेसन, मिमोलस जस्ता सदाबहार फूलका बिरुवा बिक्री गर्दै आएकी छिन् ।
फूलको प्रजाति, विशेषता आदिका बारेमा प्रशिक्षण लिँदै अर्को मौसमका लागि बिरुवा उमार्ने तयारीमा गुरुङ हुनुहुन्छ । फूलका बिरुवा खरिद तथा संरचना निर्माणका लागि उनले झण्डै रु ५० लाख लगानी भएको बताइन् । “मैले अपेक्षा गरेको भन्दा निकै राम्रो व्यापार भएको छ”, गुरुङले भनिन्, “ग्राहकको मागलाई थेग्न निकै मुस्किल परेको छ ।”
व्यावसायिक फूल खेतीका लागि जिल्लाकै एक मात्र व्यवसायी भए पनि सरकारी निकायबाट सहयोग नपाएको उनको गुनासो छ । सरकारी निकायमा सहयोग माग्दा निकै झन्झट बेहोर्नु परेको गुरुङले बताए । “शुरु–शुरुमा सरकारी निकायमा सहयोग माग्न गए”, गुरुङले भने, “ आश्वासन पाएँ तर कहिल्यै सहयोग पाइनँ ।”
बिहानदेखि साँझसम्म आफैँ बारीमा खट्ने गुरुङले अहिले दुईजनालाई रोजगारीसमेत दिएकी छिन्। त्यो बाहेक फूल रोप्ने बेला ज्यालामा खेताला समेत लगाउने गरेको उनले बताइन् । नर्सरीमा उत्पादन भएको फूलले बजार पाउँदा आफुलाई निकै खुशी लागेको गुरुङ बताउँछन् । “फूल र मालाको माग बढ्दा झन उत्साहित भएकी छु”, उनले भने, “आगामी वर्ष अझै विस्तार गर्ने योजनामा छु ।”
साइकल यात्राको मज्जा लिँदै मुस्ताङमा विदेशी पर्यटक
खाली पेटमा कहिल्यै नखानुहोस् यी कुरा ! जसले बिगार्न सक्छ तपाइको स्वास्थ्य